Lesi sihloko osesikhundleni “One-indlela Mars uhambo: olufinqiwe kuhlanganisa Australia eziyisikhombisa” kwalotshwa Michael Safi, for theguardian.com ngoLwesibili 17 Febhruwari 2015 06.18 UTC
Seven Australia baye benza ohwlini 100 candidates ancintisanayo uhambo olulodwa-indlela Mars ukusungula ikoloni lokuqala planethi ebomvu.
Teah oneminyaka engu-nesishiyagalolunye ubudala, nosomahlaya ame-up Josh Richards and geoscientist Electra Navarone babephakathi abavele naba Australian for the Mars One project, okuhlose uqale Lungisa iplanethi owesine kusuka elangeni kusukela 2025.
Sare Teah oneminyaka engu-nesishiyagalolunye ubudala uye wenza abakhethiwe. Photograph: Mars One
The project, wamisa by entrepreneur Dutch Bad Lansdorp, othi bathola okungaphezu 200,000 izicelo ezivela luthela Martians, futhi ithi whittling uhlu phansi 50 amadoda kanye 50 abesifazane.
Abazobhapathizwa bakhethwa okusekelwe "ukuqonda kwabo izingozi ezihilelekile, Umoya team kanye nesisusa yabo ukuba yingxenye yalesi ngokushesha aguqula impilo,"Ngokusho kwesitatimende.
Isikhulu esiphethe ezokwelapha The project, Norbert Clark, uthe Ukukhetha elilandelayo emahlandla zaziyoba ukugxila ekwakheni amaqembu eqinile ezingaholela ukumelana kwemihlambi settlement interplanetary.
"Ukuba omunye the best candidates ngabanye akuzenzakaleli ube Umdlali weqembu elikhulu kunawo, kanjalo ngibheke phambili ekuboneni indlela candidates bethuthuka futhi basebenze ndawonye izinselele oluzayo,"Clark wathi.
Izindawo kokuba scouted ukuqeqeshwa yasemhlabeni izindawo. Uhlu 100 ukuvotelwa bayonqunywa by maphakathi nonyaka nje 24, ngubani izothunyelwa Mars ngamaqembu amane zonke 26 izinyanga isiqala in 2024.
Yileso Inhloso, noma kunjalo. Mars One ubhalisele Lockheed Martin ngoDisemba ukwakha satellite ukuze ayifake ukujikeleza Mars in 2018. Kodwa okuphawulekayo yezobuchwepheshe - ezifana nendlela umhlaba a craft bavimba ngokuphepha Mars, futhi kanjani ukunciphisa umthelela deep space-radiation on the osomkhathi - ahlale kungalungiswa.
Le project uyophinde zidinga okungenani $ 7.7bn ukuze uthole off the emhlabathini, ngalo ihlose ukuthola lesinyenti ngokuthengisa uxhaso futhi amalungelo show engokoqobo TV mayelana project. An umkhankaso Indiegogo in 2013-14 yaphakamisa ngaphezu $400,000. Iminikelo Total njengoba of November odlule zaba mayelana $630,000.
Analysis zesayensi Independent usikisele ukuthi, ngokuphambene Mars One sika izicelo, ekusekeleni ukuphila kule planethi ebomvu kungadinga "ubuchwepheshe ukuthi bayakwazi ngaphezu isimo samanje ubuciko".
Uhlela kukhule izitshalo ngaphakathi koloni, akhiwa amaphilisi isikhala kanye engokwemvelo inflatable, empeleni ezingase ziholele ezenzweni ukunqwabelana ekuncisha umoya-mpilo, abacwaningi bathi, ukubikezela astronaut lokuqala lizofa emva 68 izinsuku.
Kodwa abavele naba, kuhlanganise Dianne McGrath kusukela Melbourne, akuzona ubuyophazamiseka. "Ukuthi abantu bacabanga ukuthi kuzoba Mars One, noma Nasa, noma ezinye uhlelo ezinye, sizokuya Mars, kungcono on the agenda for ukuhlola umkhathi,"Esho etshela Channel Ten sika The Project.
"Lokho ingxenye umoya womuntu, ukuqhubeka ukuyihlola. Angive lucky ukuba yingxenye yalowo. "